China Maitiro ekugadzira auto dashboards Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Iyo mota dashibhodhi chinhu chakakosha chikamu chemotokari, icho chakashongedzwa nemhando dzakasiyana dzekutarisa zviridzwa, zvishandiso zvekushandisa uye emagetsi masystem.
Plastiki auto dhibhodhi chinhu chakakosha chemukati mumotokari.
Iwo auto dashboards anowanzo gadzirwa epurasitiki resin "yakachinjwa PP" kana "ABS / PC". Iyo mota dhibhodhi (inonziwo dash, chiridzwa pani, kana fascia) ipaneru yekudzora inowanzo kuve yakatarisana yakanangana pamberi pemutyairi wemotokari, ichiratidza zvishandiso uye kutonga kwekushanda kwemotokari. Mhando dzakasiyana dzekudzora (semuenzaniso, mudhiraivho) uye zvishandiso zvakaiswa padheshibhodhi kuratidza kumhanya, mwero wemafuta uye kumanikidza kwemafuta, iyo dashibhodhi yemazuva ano inogona kutakura huwandu hwakawanda hwemageji, uye kutonga pamwe neruzivo, kudzora kwemamiriro ekunze uye varaidzo hurongwa. Saka rakagadzirwa uye rakagadzirwa mune yakaoma dhizaini kuti ikwane uye kutsvaga iwo madhiraivho uye zvishandiso zvakasimba uye kuita huremu hwavo.
YeMotokari dashibhodhi system
Kune akasiyana madhibhodhi, maitiro anobatanidzwa akasiana chaizvo, ayo anogona kupfupikiswa seinotevera:
1. Yakaomeswa epurasitiki dhibhodhi: jekiseni kuumbwa (zvikamu senge dhibhodhi muviri) Welding (main zvikamu, kana zvichidikanwa) gungano (zvine hukama zvikamu)
2. Semi-rigid foam foam dashboard: jekiseni / kudzvanya (dashboard masaga), kuyamwa (ganda uye marangwanda) kucheka (gomba uye kumucheto) gungano (zvikamu zvinoenderana).
3. vhuvhu kuumba / epurasitiki yakamonerwa (ganda) inopupuma furo (furo furemu) kutema (kumucheto, gomba, nezvimwewo) kutenderera (zvikamu zvikuru, kana zvichidikanwa) gungano (zvikamu zvinoenderana).
Zvishandiso pachikamu chimwe nechimwe chedashboard
Chikamu zita Mashoko Ukobvu (mm) Chikamu uremu (gramu)
chiridzwa pani 17Kg
Wepamusoro muviri wechiridzwa pani PP + EPDM-T20 2.5 2507
Airbag furemu TPO 2.5 423
Chishandiswa paneeli pasi muviri PP + EPDM-T20 2.5 2729
Yekubatsira chiridzwa chepaneru muviri PP + EPDM-T20 2.5 1516
Chengetedza pani 01 PP + EPDM-T20 2.5 3648
Chengetedza pani 02 PP-T20 2.5 1475
Yakashongedza pani 01 PC + ABS 2.5 841
Panzvimbo yekushongedza 02 ABS 2.5 465
Nzira yemhepo HDPE 1.2 1495
Kufambisa guruva PA6-GF30 2.5 153
DVD pamberi pepaneru pamotokari
YeMotokari dhibhodhi uye chakuvhuvhu
Maitiro makuru ekugadzira auto dashboards ndeaya anotevera:
Jekiseni Kuumbwa maitiro: iyo yekuomesa epurasitiki zvimedu mune jekiseni kuumbwa muchina kuburikidza sikuruwa sheari uye dhiramu kupisa uye kusungunuka mushure jekiseni muforoma kutonhora maitiro. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa kugadzira tekinoroji mukugadzirwa kwemadhibhodhi. Iyo inoshandiswa kugadzira muviri weyakaomarara-epurasitiki madhibhodhi, mafupa epurasitiki-anotora uye akapfava madhibhodhi uye mazhinji mamwe mativi anoenderana. Yakaomarara epurasitiki dashboard zvinhu zvinonyanya kushandisa PP. Huru zvigadzirwa zve dashboard mafupa ndePC / ABS, PP, SMA, PPO (PPE) uye zvimwe zvakagadziridzwa zvinhu. Zvimwe zvikamu zvinosarudza ABS, PVC, PC, PA uye zvimwe zvinhu kunze kwezvinhu zviri pamusoro zvinoenderana nebasa ravo rakasiyana, zvimiro uye nechitarisiko.
Kana iwe uchida kugadzira epurasitiki zvikamu kana kuumbwa kwedashboard, kana kana iwe uchida rumwe ruzivo。Ndapota taura nesu.
Pashure: Muforoma kupatsanura
Zvadaro: Yakapetwa-jekiseni isina mvura epurasitiki kesi ye intercom walkie-talkie
Plastic vhiri uye jekiseni kuumbwa